Tag: salesforce.com | Martech Zone
Shanta Sano ee ugu sarreysa iyo Suuqgeeyayaasha Suuqgeynta waxay sameynayaan 5
Talaado, Janaayo 27, 2015 Douglas Karr
Markii labaad, Salesforce waxay baaritaan ku sameysay in ka badan 5,000 suuqleyda adduunka si ay u fahmaan mudnaanta koowaad ee sanadka 2015 dhammaan kanaallada dhijitaalka ah. Waa kuwan muuqaalka guud ee warbixinta oo aad ka soo dejisan karto Salesforce.com. In kasta oo caqabadaha ganacsi ee ugu waawayn ay yihiin horumarinta ganacsiga cusub, tayada hogaaminta, iyo la socodka tiknoolajiyada, sida suuqleydu u adeegsadaan miisaaniyadaha iyo ulana socdaan horumarka ayaa runtii xiiso leh: 5 Meelood ee ugu Fiican Maalgashiga Suuqgeynta Warbaahinta Bulsho ee Xayeysiinta Bulshadda Suuqgeynta Bulshada
Mintigo: Dhibcaha Lead ee Saadaasha ee Ganacsiga
Arbacada, Nofeembar 19, 2014 Arbacada, Agoosto 26, 2015 Douglas Karr
Markaan nahay suuqleyda B2B, dhamaanteen waan ognahay in lahaanshaha nidaamka dhibcaha hogaaminta si loo aqoonsado hogaaminta iibka-diyaarka ah ama iibsadayaasha suurtagalka ah inay muhiim u tahay socodsiinta barnaamijyada jiilka baahida guusha leh iyo ilaalinta dayactirka suuq-geynta iyo iibinta. Laakiin hirgelinta nidaamka dhibcaha hogaaminta ee run ahaantii shaqeynaya waa ka sahlan tahay in la yiraahdo intii la qabtay. Mintigo, waxaad hadda kuheli kartaa tusaalayaal dhibco horseed ah oo ka faa'iideysanaya awoodda falanqaynta saadaasha iyo xogta weyn si ay kaaga caawiso inaad si dhakhso leh u hesho iibsadayaashaada. Ma sii qiyaasayo.
BIME: Software oo ah Sirdoon Ganacsi Adeeg
Khamiista, Febraayo 7, 2013 Arbacada, February 6, 2013 Douglas Karr
Maaddaama tirada ilaha xogta ay sii kordheyso, nidaamka sirdoonka ganacsiga (BI) ayaa kor u kacaya (markale). Nidaamyada sirdoonka meheraddu waxay kuu oggolaanayaan inaad horumariso warbixinta iyo dashboodyada ku saabsan xogta dhammaan ilaha aad ku xidhan tahay. BIME waa Software sida Adeeg (SaaS) Nidaamka Sirdoonka Ganacsi ee kuu oggolaanaya inaad ku xirmaan labada khadka tooska ah iyo kan adduunka ka jira oo isku meel ah. Abuur isku xirnaanta dhammaan ilaha xogtaada, abuur oo samee su'aalaha
Waa maxay RFM-gaaga Blog?
Arbacada, Maarso 11, 2009 Talaado, Oktoobar 4, 2011 Douglas Karr
Shaqada waxaan sameyn doonaa webinar toddobaadkan. Mawduuca maskaxdayda ayuu ku jiray muddo dheer ka hor inta aan u shaqeynin Compendium Blogware, in kastoo. Maalmihii ugu horreeyay ee xirfaddayda suuq-geynta xogta, waxaan ka caawiyay horumarinta iyo naqshadeynta barnaamijyada ka caawin doona suuqleyda inay muujiyaan saldhigooda macaamiishooda. Isleeggu waligiis isma beddelo, in muddo ahba waxay ku saabsan tahay soo noqnoqoshada, soo noqnoqoshada iyo qiimaha lacagta. Waxay kuxirantahay taariikhda iibsashada macaamiisha, waxaad saameyn ku yeelan kartaa dhaqankooda